"Ary ny mpihazakazaka rehetra dia mahonon-tena amin’ny zavatra rehetra. Kanefa ireny dia mitady satroboninahitra mety ho lo ihany, fa isika kosa ny tsy mety ho lo."1 Korintiana 9:25
"Efa niady ny ady tsara aho ; nahatanteraka ny fihazakazahako aho ; nitahiry ny finoana aho ; hatrizao dia tehirizina ho ahy ny satroboninahitry ny fahamarinana, izay homen’ny Tompo, Mpitsara marina, ho ahy."2 Timoty 4:7,8
Hoy ity vehivavy mpanao fanatanjahantena, izay nahazo medaly halimo tamin’ny Lalao Olympika tany Londra, tamin’ny mpanao gazety: « Ny taekwondo (na karaté koreana) no nampisy dikany ny fiainako… Tena sarotra ny lalana fa nankany anaty ala mikitroka tany Guyane izahay, mba hanao fanazaran-tena toy ny mpikarama an’ady. Navelako avokoa ny zava-drehetra, mba hanatanterahako ny nofinofiko ». Izany ka fanehoana herim-po sy tanjaka, mba hahatratrarana izay nokendrena !
Mipetraka ny fanontaniana : haharitra hafiriana izany fahafaham-po nahatratra ny tanjona nokendrena izany? Na ny satroboninahitra ravintsara, izay tsy maharitra, nomena ireo mpanao fanatanjahantena tany Grisia fahiny, na ireo medaly olympika, dia samy tsy mitondra afa-tsy fahasambarana mandalo ihany. Misy àry ve valisoa hifaliana mandrakizay? Ny apostoly Paoly dia mampahafantatra antsika fa misy satroboninahitra tsy mety lo, dia izay homen’i Jesosy Kristy ho an’ireo izay nanaja Azy. Tao aminy no nahitan’i Paoly ny Mpamonjiny (1 Timoty 1:15), ary ny fiainany manontolo dia natokany ho an’io Mpamonjiny io. Misy miteny hoe: « Ny fanatanjahantena no fiainako; ny zanako no fiainako; na koa : ny asa no fiainako »; fa hoy kosa i Paoly: “Kristy no anton’ny ahavelomako” (Filipiana 1:21). Nariany ireo hambony sy ny fiheveran-tenany ho marina -nataony ho “taimboraka”-, ka nahazo an’i Kristy izy, mba hotafiana ny fahamarinana “izay avy amin’ny finoana an’i Kristy” (3:9). Tahaka ny mpanao fanatanjahantena, dia niezaka “hanatratra ny marika” izy, mba hahazoany “ny lokan’ny fiantsoan’Andriamanitra any ambony” (3:14). Nanomboka hatreo izy dia nanokana ny fiainany sy ny heriny manontolo ho an’i Kristy, satria nahafantatra fa hiaraka aminy mandrakizay.
Aoka tsy hametra ny fianantsika amin’ny fikatsahana fahafahampo mandalo. Ny tena fiainana dia ao amin’Andriamanitra no loharanony, ary maharitra mandrakizay izany.